2 Samoela 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Samoela 5:1-25
5 Tatỳ aoriana, dia tonga tany amin’i Davida+ tao Hebrona+ ny foko rehetran’ny Israely, ka niteny hoe: “Indreto izahay, taolanao sy nofonao.+ 2 Ianao no efa nitarika ny Israely tamin’ny ady,+ na omaly na talohan’izay,+ fony i Saoly mbola mpanjakantsika. Ary nilaza taminao i Jehovah hoe: ‘Ianao no hiandry+ ny Israely oloko, ary ianao koa no ho mpitarika+ ny Israely.’” 3 Tonga tany amin’ny mpanjaka tao Hebrona àry ny anti-panahy+ rehetran’ny Israely. Ary nanao fifanekena+ tamin’izy ireo teo anatrehan’i Jehovah tao Hebrona i Davida Mpanjaka. Avy eo dia nohosoran’izy+ ireo ho mpanjakan’ny Israely i Davida.+ 4 Telopolo taona i Davida tamin’izy lasa mpanjaka, ary efapolo taona+ no nanjakany. 5 Tao Hebrona no nanjakany teo amin’ny Joda fito taona sy enim-bolana,+ ary tao Jerosalema+ kosa no nanjakany teo amin’ny Israely rehetra sy ny Joda telo amby telopolo taona. 6 Dia nankany Jerosalema ny mpanjaka sy ny olony mba hanafika an’ireo Jebosita+ nonina tao amin’ilay tany. Ary hoy ny Jebosita tamin’i Davida: “Tsy ho tafiditra eto ianao, fa ny jamba sy ny kilemaina no hisakana anao.”+ Nieritreritra mantsy izy ireo hoe: “Tsy ho tafiditra eto i Davida.” 7 Voababon’i Davida ihany anefa i Ziona,+ ilay tanàna voaro mafy, izany hoe ny Tanànan’i Davida.+ 8 Koa hoy i Davida tamin’izay andro izay: “Izay mamely an’ireo Jebosita,+ dia aoka izy hiditra avy eo amin’ny tionelin-drano,+ ka hamely ny kilemaina sy ny jamba, izay samy halan’i Davida!” Izany no anton’ilay fitenenana hoe: “Tsy hiditra ao an-trano ny jamba sy ny kilemaina.” 9 Ary nanorim-ponenana tao amin’ilay tanàna voaro mafy i Davida. Dia nantsoina hoe Tanànan’i Davida izy io. Ary nanorina manda sy zavatra hafa teo amin’ilay Dongon-tany+ sy tao an-tanàna izy. 10 Koa nihanahery hatrany i Davida,+ ary nomba azy+ i Jehovah Andriamanitry ny tafika.+ 11 Ary nandefa iraka+ ho any amin’i Davida i Hirama+ mpanjakan’i Tyro, sady nandefa hazo sedera+ sy mpandrafitra ary mpanao ny vato hatao rindrina. Dia nanorina trano ho an’i Davida ireo.+ 12 Ary fantatr’i Davida fa efa nampitoetra azy ho mpanjakan’ny Israely+ i Jehovah, sady nanandratra+ ny fanjakany, noho ny amin’ny Israely olony.+ 13 Nandritra izany fotoana izany, dia naka vadikely+ sy vady+ hafa koa tao Jerosalema i Davida, rehefa tonga avy tany Hebrona. Ary mbola niteraka zazalahy sy zazavavy hafa koa i Davida. 14 Ireto avy ny anaran’ireo naterany tany Jerosalema: Samoa,+ Sobaba,+ Natana,+ Solomona,+ 15 Jibara, Elisoa,+ Nafega,+ Jafia,+ 16 Elisama,+ Eliada ary Elifeleta.+ 17 Rehefa ren’ny Filistinina fa nohosorana ho mpanjakan’ny Israely i Davida,+ dia niakatra hitady an’i Davida izy rehetra. Ren’i Davida izany, ka nidina tany amin’ny toerana sarotra haleha izy.+ 18 Ary tonga ny Filistinina, ka nihaodihaody teo amin’ny lemaka ivan’ny Refaima teo foana.+ 19 Dia nanontany+ an’i Jehovah i Davida hoe: “Hiakatra hamely ny Filistinina ve aho? Hatolotrao eo an-tanako ve izy ireo?” Ary hoy i Jehovah taminy: “Miakara, fa hatolotro eo an-tananao tokoa ny Filistinina.”+ 20 Koa nankany Bala-perazima+ i Davida, ka novonoiny tany izy ireo. Ary hoy izy: “I Jehovah efa nialoha ahy ka namaky ny laharan’ny fahavaloko,+ sahala amin’ny rano mamaky fefiloha.” Koa nataony hoe Bala-perazima ny anaran’io toerana io.+ 21 Ary navelan’ny Filistinina teo ny sampiny,+ ka nentin’i Davida sy ny olony.+ 22 Niakatra indray ny Filistinina tatỳ aoriana,+ ka nihaodihaody teo amin’ny lemaka ivan’ny Refaima.+ 23 Koa nanontany+ an’i Jehovah i Davida, ka novaliany hoe: “Aza miakatra, fa mandehana mihodidina mankany aorian’izy ireo, ary mameleza azy tandrifin’ireo hazo bakà.+ 24 Rehefa mandre figadongadona eny an-tendron’ireo hazo bakà ianao, dia manaova zavatra avy hatrany,+ satria ho efa nivoaka hialoha anao i Jehovah amin’izay fotoana izay mba hamely ny tobin’ny Filistinina.”+ 25 Koa izany no nataon’i Davida, araka izay nandidian’i Jehovah azy.+ Dia nasiany+ ny Filistinina hatrany Geba+ ka hatrany Gazera.+